डा. केसीको अनसन अहिलेसम्मकै लामो - Prawas Khabar
डा. केसीको अनसन अहिलेसम्मकै लामो
७ साउन, काठमाडौं । चिकित्सा शिक्षा सुधारको माग राख्दै डा. गोविन्द केसी विगत २४ दिनदेखि आमरण अनसनमा छन् । डा. केसीको यो अनशन अहिलेसम्मकै लामो भएकाे छ ।
यसअघि ११ औं अनसनका क्रममा डा. केसी २३ दिन लामो अनसन बसेका थिए । उनले गत वर्ष साउनमा २३ दिन लामो अनसन बसेका हुन् । तर त्यसबेला प्राकृतिक विपद् आएको भन्दै उनले २३ दिनमा आफ्नो अनसन अचानक स्थगित गरेका थिए । त्यो नै उनको अहिलेसम्मको सबैभन्दा लामो अनसनको रेकर्ड हो ।
जबकि पन्ध्रौं अनसनसम्म आइपुग्दा डा. केसीको अनसन अझै केही दिन जारी रहने देखिएको छ । सरकार मागप्रति संवेदनशील नभएको भन्दै डा. केसी पक्षले पूर्ण म्यान्डेडसहितको वार्ता टोली गठन गर्न सरकारसित माग गरिरहेको छ ।
हाल गठित वार्ता टोलीसित समेत डा. केसी पक्षले वार्ता गर्न इन्कार गरेका छन् । जसका कारण डा. केसीको यो अनसन थप लम्बिने देखिएको छ ।
सरकारले केही दिनलाई संसद् स्थगित गरेर सकारात्मक संकेत दिए पनि संसदमा पेश भएको चिकित्सा स्वास्थ्य विधेयक फिर्ता लिने संकेत दिएको छैन ।
विधेयक फिर्ता हुनुपर्ने माग राख्दै अनरन बसेका डा. केसीले गत असार १६ गते जुम्लाबाट आफ्नो अनसन सुरु गरेका थिए । उनले संसदमा पेश गरिएको चिकित्सा शिक्षा विधेयक संसदबाट फिर्ता हुनुपर्ने माग राख्दै अनसन बसेका थिए ।
तर अनसनका कारण उनको स्वास्थ्यमा गम्भीर समस्या देखिएपछि सरकारले डा. केसीलाई चार दिनअघि जुम्लाबाट ‘रेस्क्यु’ गरी काठमाडौ ल्याएको थियो । डा. केसी हाल त्रि.वि शिक्षण अस्पताल, महाराजगञ्जमा रहेका छन् । उनको मागप्रति ऐक्यवद्धता जनाउँदै विभिन्न राजनैतिक दलले समेत काठमाडौमा आन्दोलन गर्दै आएका छन् ।
सुर्खेतमा दुई वृद्ध मृत फेला
नबिल बैंकद्वारा रक्तदान कार्यक्रम
मेलम्ची र कुलेखानीका ठेकेदार कम्पनीले पाए तनहुँ जलविद्युतको ठेक्का
विप्लव, कुमार लिङ्देनदेखि सिके राउतसम्मलाई वार्तामा बोलाउँदै सरकार
साउनको महिमाः किन उपवास बस्ने, किन मन्दिर धाउने ?
प्रदेश र स्थानीय तहबीच कर विवाद